Qorshaha isgaarsiinta, sumcadda iyo sawirka, joornaalka degmada, bogga internetka, isgaarsiinta gudaha, xiriirka saxaafadda, suuq-geynta dhulka, shabakadaha bulshada... iyada oo la adeegsanayo iskaanka qalabyada kala duwan, Mooc wuxuu kuu keenayaa aqoonta iyo xirfadaha lagama maarmaanka u ah si loo dhigo aasaaska istaraatiijiyada isgaarsiinta laqabsoomay bulshooyinka.
Iyada oo ku saleysan hadafyada gaarka ah ee maamulada maxalliga ah (fulinta, sida ugu dhow ee suurtogalka ah ee muwaadiniinta, howlgalka adeegga dadweynaha ee dhammaan dhinacyada nolosha), waxay sidoo kale horseed u tahay dib u milicsiga arrimaha istaraatiijiga ah ee isgaarsiinta ee ku wareegaya saddex xagal la doortay saraakiisha / saraakiisha. / muwaadiniinta.
Mooc wuxuu leeyahay lix fadhi. Kalfadhi kastaa waxa uu ka kooban yahay muuqaalo gaagaaban, markhaatiyaal ka yimid xirfadlayaal, su'aalo-waraysiyo iyo dukumeentiyo la socda… iyo sidoo kale madal dood ah oo u oggolaanaysa in ay isweydaarsadaan ka qaybgalayaasha iyo kooxda waxbaridda. Kalfadhiga shanaad waxa la tayeeyay si loo daboolo baahiyaha ardaydii fadhiyadii hore.
Aasaaska xiriirka guud ee dhuleed Janaayo 17th, 2022Tranquillus
READ Ka faa'iidaystaha waajibaadka shaqaalaynta ee shaqaalaha naafada ah (BOETH)
socdaSiyaasadda biyaha dadweynaha 5 su'aalood